Southampton Oo Stamford Bridge Dhex jiid Jiiday Chelsea, Mourinho Oo Dhiiqo Kale Lugaha La Sii Galay Iyo Kooxda Koobka Horyaalka Haysata Ee Blues Oo Markale Soo Bandhigtay Qaab Ciyaareed Musiibo Ah |
Southampton Oo Stamford Bridge Dhex jiid Jiiday Chelsea, Mourinho Oo Dhiiqo Kale Lugaha La Sii Galay Iyo Kooxda Koobka Horyaalka Haysata Ee Blues Oo Markale Soo Bandhigtay Qaab Ciyaareed Musiibo Ah
Kooxda Southampton ayaa Stamford Bridge ku dubatay kooxda horyaalka Ingiriiska haysata ee Chelsea, waxayna Saints guushan dahabiga ah ku gaadhay 3:1. Inkasta oo ay Chelsea gool ku hormartay ayay haddana guul daro xanuun badan garoonkeeda kagala kulantay kooxda Southampton oo marti u ahayd. Waxaana goolashan kala dhaliyay Steven Davis ,Sadio Mané iyo Graziano Pellè halka uu Chelsea goolka kaliya udhaliyay Willian.
Waa markii ugu horaysay ee kooxda marti ku ah Stamford Bridge ay Mourinho kooxdiisa Stamford Bridge kaga dhaliso wax ka badan laba gool, wuxuuna kulankani ahaa kulankii 102 aad ee uu Mourinho kooxda Chelsea tababare ugu ahaa Stamford Bridge.
Chelsea ayaa Stamford Bridge ku soo dhawaysay kooda Southampton kulan ay Blues iyo tababaraheeda Mourino ay si wayn ugu baahnaayeen inay guul ka gaadhaan si ay tubta guusha ugu soo laabato. Chelsea ayaa xili ciyaareedkan ku jirta qaab ciyaareed aad u liita isaga oo Mourinho shalay qirtay inuu ku jiro xaaladii ugu xumayd waayihiisa tababaranimo.
Tababare Mourinho ayaa shaxdiisa dib ugu soo celiyay kabtanka Blues ee John Terry oo muddo kursiga kaydka ku fadhiyay halka Eden Hazard oo kulankii Porto kursiga kaydka la dhigay uu isaguna shaxda Blues ee kulankan uu ku bilawday. Dhinaca weerarka Mourinho ayaa u doortay Falcao.Chelsea
Wuxuu ahaa kulan si gaar ah loo fiirsanayay iyada oo la sugayay jawaabta ay Chelsea ka bixin doonto guuldaradii FC Porto iyo barbarihii Newcastle United ay kala kulantay. Laakiin Chelsea ayaa ciyaarta si dardar ah ku bilaabatay taas oo keentay inay daqiiqadii 10 aad la timaado goolkeeda furitaanka, waxaana gool qurux badan oo laaga xorta ah ku yimid udhaliyay Willian oo xili ciyaareedkan ah furaha kooxda Blues, waxayna ciyaartu noqotay 1:0 ay Chelsea hogaanka xili horeba kula wareegtay.Willian
Oriol Romeu ayaa Eden Hazard qalad kaga galay dhinaca bidix, waxaana goonta qaladka Blues loo dhigay kubabda dhigtay Willian kaas oo soo tuuray kubbad wareegaysa taas oo inta ay birta ku dhacday si toos ah u gashay goolka Southampton. Shan ka mid ah 21 ka gool ee ay Chelsea xili ciyaareekdan ka dhalsiay tartamada oo dhan ayaa lagu dhaliyay laaga xorta ah.
Chelsea ayaa dadaal ugu jirtay inay la timaado goolka kalsoonida si ay ciyaarta u disho, waxayna u muuqatay inay ku soo laabanayso qaab ciyaareedkii ilqabadka lahaa ee ay xili ciyaareedkii hore ku jirtay. Eden Hazard, Willian iyo Fabregas ayaa ahaa fursado fiican abuurayay.
Daqiiqadii 32 aad ayay Southampton heshay rekoodhe cadaan ah kadib markii uu Ramirez qalad ku galay Sadio Mane oo xerada ganaaxa Blues ku jiray laakiin garsooraha kulankan ee R. Madley ayaa ku guuldaraystay inuu go’aan sax ah qaato waxayna ahayd nasiib uu Ramirez ku lahaa in aan rekoodhe lagu dhigin isla markaana aan kaadhka digniinta ah la siin.Mane
Hal daqiiqo oo kaliya kadib ayuu garsooruhu kaadhka digniinta ah Sadio Mane ku siiyay inuu istuuray markii uu cadaadis kala kulamay Ivonovic.Southampton ayaa markan bilawday inay kubbad fiican ciyaarto isla markaana ay raadiso goolka barbaraha.
Daqiiqadii 38 aad ayay Southampton hurdada ka kacday waxayna markeeda bilawday inay halis ku abuurto difaaca iyo goolka Chelsea, waxaayna kubbad uu Davis ka soo tuuray meel goolka Chelsea u jirtay 38 yards dirqi isaga saaray Cahil.
Markale daqiiqadii 42 aad ayuu Bertrand helay fursad gool loo fishay kadib markii uu Sadio Mane kubbad aan la rumaysan karin oo qurux badan uu ka dhex saaray difaaca Chelsea laakiin goolhaye Begovic ayaa sameeyay badbaadin cajiib ah si uu shabiqiisa u sii ilaashado.
Laakiin goolka Southampton ayaan fursdo badan kadib soo daahin, waxaana daqiiqadii 43 aad gool ka barbaraha udhaliyay Steven Davis kaas oo darbo gantaal ah ku tuuray goolka uu Begovic waardiyaha ka ahaa, wuxuuna ciyaarta ka dhigay barbaro 1:1 ah.qata hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay barbaro 1:1 ah.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii danbe ee ciyaarta ayay labada tababare isbadal ku sameyeen shaxahooda, wuxuuna Mourinho soo saaray Ramires oo qaybta hore ee ciyaarta kaadhka digniinta ah la siiyay in kasta oo uu nasiib ku lahaa inuu ka badbaaday in rekoodhe lagu dhigo waxaana lagu soo badalay Nemanja Matić, sidoo kale Southampton ayaa ciyaarta soo galisay James Ward-Prowse iyada ciyaarta laga saaray Oriol Romeu.
Southapton ayaa daqiiqadii 49 aad ayay Saints khal khal ku abuurtay difaaca Blues iyada oo kooxda martida ahayd ee Southamton heshay fursado xidhiidh ah oo marar badan loo fishay goolkeeda labaad. Ugu horayn Mane ayaa fursad banaan ah ku helay Begovic laakiin goolhaye Begovic ayaa jawaab fiican bixiyay isaga oo sameyay badbaadin fantastik ah, laakiin dhawr jeer oo kale ayay kubbadu shabaqa soo taaban gaadhay.
Daqiiqadii 57 aad ayay Chelsea dadaal fiican samaysay iyada oo Radamel Falcao uu fursad fiican helay laakiin kubbada oo ka dheeraatay iyuu xidiga ree Colombia isku dayay inuu rekoodhe raadiyo isaga oo isku dultuuray goolhayahay Southampton laakiin garsoore R. Madley ayaa kaadhka digniinta ah u taagay Falcao.
Laakiin daqiiqadii 60 aad ayay Southampton markeeda hogaanka ciyaarta la wareegtayt kadib markii uu Sadio Mané ka faa’iidaystay qalad uu difaaca Chelsea sameeyay isla markaana uu kooxda martida ahayd ee Siants udhaliyay goolkeeda labaad, wuxuuna icyaarta ka dhigay 2:1 ay Southampton hogaanka ciyaarta ku qabtay.
Ugu horayn Gary Cahill ayaa kubbada si qalad ah ugu lumiyay Pelle markale John Terry oo difaaca ugu danbeeyay ahaa ayaa markiisa qalad kale sameeyay isaga oo joojin kari waayay Sadio Mane, wuxuuna Mane kubbada si fiican ud dhaafsaday Begovic oo kulankan dadaal badan samaynayay.
Daqiiqadii 72 aad ayuu xaalka Chelsea faraha ka baxay kadib markii ay Southampton la timid goolkeeda saddexaad, waxaana goolkan udhaliyay Graziano Pellè kaas oo ka faa’iidaystay kubbad uu Chelsea ku kala dhantaalay Sadio Mané oo soo kulankan soo bandhigay qaab ciyaareed cajiib ah, waxayna ciyaartu noqotay 3:1 ay Southampton ku dubanayso Chelsea oo garoonkeeda joogta.
Difaaca Chelsea ayaa si rasmi ah iskugu dhex yaacay halka xidiga Blues ay bilaabeen inay kubbada lumiyaan, waxaana markan kubbada lumiyay Eden Hazard waxaana si deg deg ah kubbada u soo qaatay Sadio Mane oo ahaa mid aan la qaban karin, wuxuuna markii uu cidhifka xerada ganaaxa Chelsea uu soo gaadhay uu kubbada goob banaan udhigay Pelle kaas oo aan wax naxariis ah u muujin Blues isaga oo sidaa ku dhaliyay goolka Blues dhulka jiiday.
Mourinho ayaa si xun u caadhooday wuxuuna ciyaarta ka soo saaray Nemanja Matić oo uu ciyaarta ku jiray 27 daqiiqo oo kaliya wuxuuna ku soo badalay Loïc Remy. Badalkan ayaa ceeb ku ahaa mid ka mid ah xidigihii xili ciyaareedkii hore Premier Leaque-ga ugu fiicnaa ee Matic.
Run ahaantii Chelsea qaybtii hore ee ciyaarta ayay ka faa’iidaysan wayday markii ay hogaanka haysay, laakiin kooxda Mourinho ayaa qaybta danbe soo bandhigtay qaab ciyaareed aad u liitay, waxayna difaaca Blues ahaan kuwo ka liiday difaaca xili ciyaareedkan ugu liita ee Newcastle United, waxayna la dhibtoodeen dhaqdhaqaaqa aan joogisaga lahayn ee Sadio Mane.
Ugu danbayn ciyaarta ayaa ku dhamaatay 3:1 ay Southampton ku dardartay kooxda Chelsea oo marti loogu ahaa garoonkeeda, waxaana Chelsea sidaa ku soo gaadhay guuldaradeedii afraad ee xili ciyaareedkan. Chelsea ayaa laba kulan oo ka mid ah saddexdii ugu danbeeyay ee ay Stamfrod Bridge ku ciyaartoy laba ka mid ah guuldaraysatay halka ay hal kulan hore uga guuldaraysatay 48 kii kulan ee ugu danbeeyay.Guuldaradan ayaa ah mid musiibo horleh ku ah Mourinho oo markii horeba qirtay inuu xaaladii abid ugu xumayd uu ku jiro.